U-Anavar ungenye ye-steroid yokusika engcono kakhulu esetyenziswa ngabantu kunye nabasetyhini AASraw
U-Anavar ungenye ye-steroid yokusika engcono kakhulu esetyenziswa ngamadoda nabasetyhini
/Blog/i-oxandrolone/U-Anavar ungenye ye-steroid yokusika engcono kakhulu esetyenziswa ngamadoda nabasetyhini
ezaposwa ngomhla 12 / 14 / 2017 by UDkt Patrick Young bha liweyo i-oxandrolone.
1.Yintoni uAnavar? 2.Iziphumo zikaAnavar
I-3.Iziphumo ezintle kubantu I-4.Iempembelelo ezintle kubafazi
I-5.Anavar Imijikelezo kunye nokuSebenza 6.Anavar Izibalo kunye noLawulo
7.Izinzuzo zikaAnavar 8.Anavar Effects Side
9.Ukuphi ukuthenga i-Anavar yangempela ipowder eluhlaza kwi-intanethi?
I-Oxandrolone / Anavar eluhlaza powder video
|.Oxandrolone / Anavar esisiseko Abalinganiswa:
igama: Oxandrolone / Anavar
I-molecular Formula: C19H30O3
Isisindo somzimba: 306.4397
Anavar imela enye yezona zithandwa kakhulu oral anabolic steroids lonke ixesha, kwaye oku kubangelwa kukunyamekela kakuhle. Lo ngowomnye wabambalwa anabolic steroids ezingasetyenziselwa ngokukhuselekileyo ngamadoda nabasetyhini, kwaye yile enye yezona zinto zichaphazelekayo. Nangona kunjalo, kwezinye iindidi i-Oxandrolone iyanconywa kakhulu ngenxa yobunjani bayo, kodwa ngoku kubangelwa ukulindela okungenangqiqo. Abaninzi badla ukucinga yonke into anabolic steroids kufuneka ivelise isethi semiphumela ethile kwizinga elithile lamandla, kodwa inyaniso iyasitshela ukuba i-steroid ehlukeneyo ithwala iziphumo kunye neenjongo ezihlukahlukeneyo. U-Anavar akakho umbuzo onenzuzo kakhulu anabolic steroid, kodwa ukuze siyiqonde iimfuno zayo kufuneka siyiqonde.
Ukubhukuda / Ukuphela kwexesha: Njengoko i-hormone ye-Oxandrolone ayifuni i-aromatize, nayiphi na isisindo esifumaneka ngenxa yokusetyenziswa siya kuba sisisindo somzimba esisondayo. Ukugcinwa kwamanzi akunakwenzeka ngenxa yokusebenzisa le steroid. Nangona kunjalo, iintlawulo ezinkulu zihlala zihambelana nazo imijikelezo ye-steroid akufanele ilindeleke ngeli steroid, ngokukhawuleza ayinqunywanga. Umntu kufuneka akwazi ukufumana ezinye izicubu ezinobuhlungu kwaye amaninzi amanqaku angama-Anavar athathwe lula. Kodwa ayiyi kunika i-gains efana namaziko amaninzi awaziwayo Anadrol, Dianabol, Nandrolone or testosterone. Abanye banokuyifumana naphezu kweenzuzo ezilinganayo ezifunayo.
Ngoxa u-Anavar akonaxesha elihle kakhulu bulking steroid kumadoda, xa kuziwa ekusebenziseni amabhinqa kufuneka senze ikhefu. Abasetyhini banomdla ngakumbi ku-Anavar kunamadoda, kwaye ingaba yintsebenziswano ephumelelayo yonyaka. Ukongezelela, abaninzi abafazi abafuni ukufumana inzuzo kubukhulu becala naphakathi kwamanqanaba emaduna; ukunyuka kancinci kwe-muscularity kunokutshintsha.
Kungakhathaliseki ukuba nesondo, bonke abasebenzisa i-Oxandrolone kwixesha elide lokufumana izigaba baya kuqonda iimpawu zokuphucula izixhobo. Abo bancedisa kunye ne-Oxandrolone hormone baya kufumana bafumane amanqatha omzimba omncinci ongekho ngaphantsi kunokuba bebeya kwenza okunye. Ngenxa yamanqanaba okwandiswa kwe testosterone yamahhala, abantu baya kufumana nezinye i-steroids ezisetyenziselwa ukuba zibe namandla. Akunakuba yiqela, kodwa yonke into yokugqibela inceda.
Ukulahleka Kwempahla: Ngaphandle kwembuzo, indoda okanye ibhinqa enye yezona zihlandlo ezifanelekileyo zokuncedisa kunye no-Anavar ziya kubakho kwisigaba sokusika. Le nto iya kuba yinjongo eqhelekileyo yokusetyenziswa njengokuba uninzi lwabantu abasebenzisa i-anabolic steroids bathatha inxaxheba kwimidlalo yokukhuphisana ethatha ngaphandle kwinqanaba lokuphucula i-athletic ngendlela esemthethweni. Ngenxa yendalo yayo enamandla ye-anabolic, u-Anavar ungenye ye-steroids efanelekileyo emhlabeni ukuze alondoloze izicubu ezinomzimba ngexesha lokutya. Ukuze silahlekelwe ngamafutha omzimba, kufuneka sitshise iikhalori ezingaphezu koko sidla. Isihluthulelo sokutya okuphumelelayo silahlekelwa yioli efunwayo ngelixa silondoloze izicubu ezinobuhlungu kunokwenzeka; Noko ke, ukulahleka kwemisipha kuya kwenzeka. Akunandaba nokuba ucwangcise kakuhle kangakanani ukutya kwakho, ukulahleka kwemisipha kuya kwenzeka xa i-agent anabolic enamandla ingekho. U-Anavar uyilungu eliyidingayo ngenxa yeengxelo ezichazwe ngasentla malunga nemiphumo yazo.
Abo baxhasayo kunye no-Anavar ngexesha lesigaba sokusika baya kutshisa amafutha ngenqanaba elifanelekileyo. Kungakhathaliseki ukuba i-lipolysis echanekileyo yintoni enamandla okanye ayikho, isantya sokunciphisa umzimba siya kuphuculiswa kakhulu. Emva kokuxhomekeka, umntu uya kufumana ukuba ubonakala ekhuni kwaye echazwe ngakumbi. Oku kudla ngokuhambisana ne-vascularity ephuculweyo, kunye nokubukeka ngokubanzi.
U-Anavar uxabiswa kakhulu ngabadlali abaninzi ngenxa yezizathu ezithile. Le steroid iya kwandisa amandla; ukunyuka kwamaxabiso angeke kubonakale njengento ephawulekayo njenge-steroids efana ne-Dianabol kwaye akukho ndawo kufuphi nendawo yeHalotestin, kodwa iya kubonakala. Amandla ngenye yezona zinto ziphambili zezemidlalo njengoko ziguqulela kwisantya kunye namandla. Abadlali bezemidlalo baxabisa uAnavar ngenxa yokuba ayiyi kuvelisa i-buildup enkulu. Kwezinye iimeko, ubunzima obongeziweyo bunokuba ngumqobo kumdlalo, kwaye kwezinye iimeko, kuya kuzisa amehlo apho kungekho mdlali oyifunayo kubo. Xa siqhubeka sicinga ukuba le steroid ayikwazi ukukhokelela ekugcinweni kwamanzi, umthwalo ongenakwenzeka kubadlali abaninzi, ukuphumula kuka-Anavar njengenye yezinto eziphambili zezemidlalo.
Okuphambili: Kungakhathaliseki injongo yokusetyenziswa, bonke abo bancedisa kunye ne-Oxandrolone baya kufumana izinga labo lokuphucula, kunye nokunyamezela kwabo. Umntu akayi kuphelelwa ngamandla ngokukhawuleza, kwaye uya kuba nako ukunyusa ixesha elide kwaye kunzima. Oku akuthethi ukuba kufuneka sikwandise ixesha leeseshoni zoqeqesho, ezinokuthi okanye akunjalo ukuba kuxhomekeke kwimeko. Nangona kunjalo, siya kusebenzisa kangcono iseshoni yoqeqesho ngalunye, siya kusebenzisa kangcono ixesha lethu ensimini kwaye konke okusemgangathweni wonxibelelwano luya kwenziwa.
I-3.Iziphumo ezintle kubantu
1. Ukugqithiswa kwemveliso kuqinisekisiwe zizixhobo zayo ezinkulu. Ukusetyenziswa kojikelezo lukaAnavar kuletha izabelo ezininzi kunoma yimuphi umdlali. Iipropati zayo eziphambili zilandelayo:
Isiphumo se-anabolic esinamandla amakhulu. Iyakwazi ukuphucula ixabiso le testosterone ukuya kwi-400%.
2. Uphuculo lweAndrogenic. Ngenxa yempembelelo yemveliso, umntu unokufumana i-25% ye-testosterone.
3. Ukungabikho kwe-estrogen ngokupheleleyo. Ngeke kubekho imiba ye-estrogen.
4. Ukuphuculwa kobunzima bemisipha. Ubunzima be-muscle buya kwanda ixesha elininzi.
5. Ukutya okwaneleyo kokusebenza. Abadlali bazakwazi ukufumana iziphumo ezingcono.
6. Ukuphucula okubalulekileyo ubukho be-hormone yokukhula. Eli candelo liza kuphucula kuphela amandla onke abadlali.
7. Ukuqhaqha ngokukhawuleza nangokukhawuleza kwamafutha. Ixabiso lokuxilisa landa kakhulu.
8. Ukusetyenziswa kwezibini. Abadlali bebhinqa nabasetyhini banokukusebenzisa ngokukhuselekileyo le mveliso.
9. Ixesha elithathayo lezenzo. U-Anavar unikezela ixesha elide, elifikelela kwiiyure ze-12.
I-4.Iempembelelo ezintle kubafazi
Njengoko sele ikhankanywe ngaphambili, i-Oxandrolone ingasetyenziselwa ngabafana besibini. Ngaloo ndlela, u-Anavar kubasetyhini banokuphucula ngokucacileyo.
Kucacile ukuba amadoda nabesifazane baneendlela ezahlukeneyo. Ngoko ke, impembelelo yamalungiselelo ahlukeneyo iya kuba neziphumo ezahlukahlukeneyo. Ngoko ke, ukukhula kwamasipha kuya kuba luncedo kubadlali beentombi. Baya kuzuza ubunzima besisindo ngokukhawuleza kwaye kulula.
Enye inzuzo ngumsebenzi wokulondolozwa kwemisipha eqondileyo. Nangona umlinganiselo wekhalori ungancinci, i-Oxandrolone yenza ukuba izinga lokunciphisa umzimba likhule.
I-5.Anavar Imijikelezo kunye nokuSebenza
Nangona u-Anavar uye wafumana ukuthandwa ngokuba 'ngumbutho wokusika' okanye 'ukusika i-steroid'kwixesha elidlulileyo, amandla alo akancinci ngoku. Nangona iyakwenza kwaye incedise kakuhle kwindawo yokufezekisa ilahleko kunye nencazelo yomzimba, yinkomfa ephezulu kakhulu yokufumana ubuninzi, amandla kunye nokukhwaza. Kuba ngu 3 - ii-6 amaxesha amandla e-anabolic we-Testosterone, iinjongo ze-Anavar ngokuqinisekileyo ziya kuba zijikelezo zokuhamba.
Nangona kunjalo, ngenxa yokuba u-Anavar unyanzelisa ubuninzi kunye nobutyhefu kwindawo yokusebenza kwesibindi, ayikwazi ukusetyenziswa ngexesha elifanayo njengalezo zixhobo eziphambili ezinokutsha. Ngako oko, kudla ngokubandakanya ekuqaleni kwanophi na umjikelo wokuqala wee-6 - 8 kwiiveki ngaphambi kokuba unqunywe. Iinjongo ze-Anavar zinganwezelwa kwiiyure ezingama-10 kwisilinganiso esilinganiselweyo, nangona kunjalo, ngenxa yezinga eliphantsi lobutyhefu besibindi kunamanye amaqumrhu omlomo. Ngeenjongo zokubhikisha, iinjongo ze-Anavar zivame ukuqhutyelwa ngeemveliso ezifanayo ezisetyenziselwa ukukhwabanisa, ezinjengexesha elide testosterone (umz. Ukuxhaswa kwamanzi) kunye nokuba mhlawumbi iqela elinje Deca-Durabolin (UNandrolone Decanoate).
Ukusetyenziswa kwayo ekulahlekeni kwexabiso kunye nokusika, ii-Anavar imijikelezo zihlala zifutshane kwaye zisetyenziswe ngamacandelo asetyenziswa ukufeza iinjongo ezifanayo. Ezi zi no-anabolic steroids ezinje Testosterone Propionate, I-Trenbolone Acetate, Masteron (I-Drostanolone Propionate), njl njl. Ezi zixhobo zigcina zifana neempawu ezifana no-Anavar kwaye zikhuthaze kakhulu ukuba zingabikho ukugcinwa kwamanzi okanye ukubetha okungafunekiyo ngexesha lokunciphisa kunye nokulahlekelwa kwamathambo apho kubalulekile ukuba umakhi womzimba enze inguqu kwisichazi somzimba .
6.Anavar Izibalo kunye noLawulo
umgangatho NeAnavar ukwenzela unyango unyango luya kuwela kwi-5-10mg ngosuku lwe-20mg ngemini ngokuqhelekileyo ibe yi dose ephezulu. Ukusetyenziswa okunjalo kuya kudla ukugcina iiveki ze-2-4 kunye nekhefu elincinane emva kokusetyenziswa ngaphambi kokuqalisa umjikelezo weveki ye2-4. Ukusetyenziswa okunjalo kuya kuqhubeka ngokukhawuleza kubonakala kuyimfuneko.
Ukuqhubela phambili kwintsebenziswano yendoda, i-20-30mg ngosuku lokunika i-day dosing iya kunika ukuphucula i-athletic, kodwa ininzi iya kufumana i-40-50mg ngosuku ukuba isebenze ngakumbi. I-80mg ngosuku ayiqhelekanga, kodwa oku kuya kwandisa umngcipheko weempembelelo. Iimpawu eziqhelekileyo zamadoda ase-Anavar ziza kugqiba iiveki ze-6-8.
Kwintsebenziswano yokuqhubela phambili yabesifazane, kungakhathaliseki ukuba yintoni injongo yokusetyenziswa, i-5-10mg ngemini ngokuqhelekileyo i-dose epheleleyo. Abafazi abambalwa kakhulu baya kufuna ngaphezulu kwe-10mg ngosuku. Ukuba ezinye zifunwa kwaye i-10mg ngosuku ixhaswe kakuhle, i-15mg ngosuku ingazama ukulandelelana. Nangona kunjalo, zonke izanda kwi-dosing ziyakwandisa umngcipheko wokuhlaselwa. Imilinganiselo ye-20mg ngosuku iya kukhulisa kakhulu ingozi ngamanani angentla apha oku kumakisha kodwa iqinisekisa ukuba kukho inqanaba lesilwanyana. Imijikelezo ye-Anavar yesiGangatho iya kugcina iiveki ze-6-8.
Uninzi lwezicelo zonyango lubizwa ngokuba ngumlinganiselo we-Anavar kwi-2.5-20mg ngosuku, elalixhomekeke kakhulu kuhlobo lokugula, isifo okanye ingxaki eyayihloselwe ngu-Anavar. Kwiyeza, u-Anavar usetyenziswe njengomzekelo kwizigulane zikaGawulayo ngaphakathi kwe-20 - 80mg ngosuku ukwenzela ukulwa kunye / okanye ukubuyisela ukutshabalalisa imisipha. Kuye kwaboniswa okufanayo ngamaxhoba ashushu. Esi sibonakaliso esiqinileyo soluhlu lwamayeza jikelele oluya kusebenza ngokukhula kwemisipha kunye nezemidlalo. NjengoAnavar isilwanyana esinamava amaninzi ahlukeneyo kwizigulane, iziphumo zeAnavar nazo azixhomekeke kwiminyaka yobudala.
I-Oxandrolone iipilisi ze-Balkan PharmaNakuba u-Anavar uye waphoswa ngokungathandabuzeki njengokuba 'u-steroid omnene' kwindawo ye-anabolic, iziphumo ziboniswe ngenye indlela, kwaye njengoko kubhekisiwe ngaphambili, kukho i-3 - 6 amaxesha anamandla a-anabolic we-Testosterone . Ngako oko, kwihlabathi lezemidlalo kunye neyomzimba, i-Anavar isilinganisi sabaqalayo baqala ukuhlala nokuhlala kwi-25 - 50mg ngosuku lwentsuku kwaye kufuneka banikezele iziphumo ezintle nokuba i-bulking up or cutting down the fat. Abasebenzisi abaphambili bavame ukuqhuba phakathi kwe-50 - 80mg ngosuku, kwaye akukho mfuneko yokudlulela olu luhlu ngenxa yemiphumo ephawulekayo yokuba i-Anavar dosage inganikela. Kodwa kunqabile kakhulu, nangona kunjalo, amava aphezulu aseAnavar asebenza ngaphakathi kwe-80 - 100mg ngosuku lwemihla.
Ukuba u-Anavar uyinto enkulu ye-anabolic steroid kwi-athlete yomfazi kunye nomzimba womzimba onqwenela ukunciphisa nokuphelisa imiphumo ye-androgenic nemiphumela emibi njengoko kuboniswe kwizifundo, ininzikazi iya kusebenzisa i-Anavar isilinganiso kwi-5-10mg ngosuku. Abasebenzisi besifazane abagqityiweyo abangaphinda bafune ukunyusa imvulophu bavame ukuphakama kwi-20mg ngosuku, nangona kukhuthazwa ukuba nayiphi na yonke into esebenzayo yama-Anavar yokulungiselela umzimba okanye iinjongo zezemidlalo ingancinci kwiiveki ze-4 - 6 ngelo xesha.
Kukho into enokuthiwa ngokudibanisa umthamo we-Oxandrolone kunye ne-caffeine. Olunye uphando lubonise ukuba nje i-300mg ye-caffeine elawulwa kunye no-Anavar yandise iiplasma zegazi ze-Anavar nge-15-20x xa kuthelekiswa namanqanaba okuqala.
Njengobumnene kakhulu anabolic steroid Anavar ayifanelekanga zokujikeleza okanye ukufumana izigaba; awuyi kuvelisa inani elikhulu lezilwanyana ezisisigxina ngokusetyenziswa kwayo xa uthetha ngeenjongo zokuphucula ukusebenza; Nangona kunjalo, oko kuveliswa kuya kuba sisisipha esisisigxina. Iintlobo ezintle ezihambelana nale steroid ethile zihlala kwindawo yokulondolozwa kwemisipha kunye nomsebenzi wokuxilonga. Oku kuthetha nje u-Oxandrolone unako ukukunceda kuphela ekunciphiseni i-fat fat body kodwa ukugcina izicubu zomzimba ngexesha lokutya kwekhalori; ngokuqhubekayo, izicubu ezininzi zesistim esinawo omkhulu umsebenzi wethu wezityalo ziza kuba ngokwandisa izinga kwi-fat fat-body is used for energy. Ngenxa yokuba i-Oxandrolone ifanelekile ukunciphisa amanoni kunye nokulondolozwa kwemisipha ngokuqhelekileyo isetyenziswe ngabadlali bemidlalo ngexesha lokulungiselela kwabo ukhuphiswano, kunye neentlanzi eziqhelekileyo zokuzivocavoca ezifuna ukuba zibukeke ziqhenqa kwaye ziqine elwandle.
8.Anavar Effects Side
Njengoko kwakuchukunyiswe ngaphambili, u-Anavar udunyiswa ngokudumisa phakathi kwabakhi bomzimba, abagijimi, kunye noluntu lwezonyango ngenani eliyingcamango elincomekayo lokuncedisa umgangatho kunye nokungabikho kwemiphumela engalunganga ngokubanzi xa kuthelekiswa nezinye i-anabolic steroids ezininzi.
Iziphumo zecala lase-Estrogenic azikho ngokupheleleyo no-Anavar ngenxa yokuba ivela kwi-DHT, i-hormone ye-androgenic eye isakwazi ukuguqulela kwi-Estrogen. Ngaloo ndlela, u-Anavar ugcina le mpawu. Ngamanye amazwi, iimpembelelo eziqhelekileyo ze-Estrogen (ezifana nokugcinwa kwamanzi, ukubhubhisa, ukugcinwa kwamatye / ukuzuza, kunye nophuhliso lwe-gynecomastia) alubonakali ngokupheleleyo. Ukongeza kokungabikho kokusebenza kwe-Estrogenic, u-Anavar naye akanakho nayiphi na into eyenziwa yiProgestogenic, ngokunjalo ukulahla nayiphi na imiphumo emibi nayo.
Nangona u-Anavar efana ne-androgenic encinane kune-Testosterone ngokubanzi, iziphumo ezilapha apha zingasasaza ngokukodwa kulabo bantu abanokuthi banomdla kwimiphumo emibi ye-androgenic. Ezi ziquka ukunyuka kwesikhumba se-oily, i-acne, ukukhula kweenwele kwandisa ebusweni nasemzimbeni, kunye nemingcipheko ebandakanya umlenze wesimo somntu (MPB) kunye ne-benign prostatic hyperplasia (BPH).
Naphezu kwezinto eziqhelekileyo ezithathwa nge-Oxandrolone ngokuba "nomnene kwi-endocrine system", kukho ubungqina obuchasene ngokupheleleyo xa uphando lubonakalisile malunga nokucinywa kwe-40% ye-Testosterone yokuvelisa kunye nomsebenzi we-testicular emva kweentsuku ze-5 kuphela zokusetyenziswa kwi-15mg ngosuku ngempilo abaselula. Ngako oko, i-Oxandrolone ayifanele ithathwe ngokulula kwindawo yokucinywa kwaye iphazamise umsebenzi we-hormonal. Ukuba iyakunqanda i-HPTA (i-Hypothalamic Pituitary Testicular Axis) emva kweentsuku eziyi-5 zokusetyenziswa kwi-15mg ngosuku, iyakwenza kwaye iyakususa ukuvalwa ngokupheleleyo kwiiveki zokusetyenziswa kwizakhiwo zokuphakamisa umzimba.
Xa kuthelekiswa nezinye i-oral anabolic steroids, uphando lubonise ukuba i-Oxandrolone ibonisa inani elincinci le-hepatotoxicity kunye noxinzelelo kubasebenzi besibindi bonke. Kufuneka kuqatshelwe ukuba u-Anavar usalichaza isitifiketi kule ndawo, ngoko kuyacetyiswa ukuba ungasebenzisi i-Oxandrolone kwixesha leveki le-8-10 kwii-dose ezifanelekileyo. Ukuxhaswa ngokufanelekileyo kunye neenkxaso ezintle zenkxaso yesibindi kuhlale kubalulekile xa usebenzisa i-oral anabolic steroids, kungakhathaliseki ukuba bangathi banobulali kangakanani.
9.Kuphi ukuthenga i-Anavar yangempela ipowder eluhlaza kwi-intanethi ?
Unokufumana umthombo omkhulu we-Anavar powder kwi-intanethi, kodwa kunzima ukuthenga i-Anavar yangempela eluhlaza. Kukho imithombo emininzi ethengisa iimveliso eziyintengiso kwimarike. ngoko xa uthenga i-Oxandrolone impahla eluhlaza kwi-intanethi, kufuneka ukhethe umthombo onokubuyiselwa.
I-Proviron yinto ekhethekileyo ye-anabolic steroid ekujikelezeni imijikelezo I-Modafinil - I-Smart Smart Drug eneeNotropic Benefits